Umshini Wokugcwalisa, ICubitainer, Isiqukathi Samanzi Esigoqekayo - iKaiguan
Isikhwama sokuzijabulisa esibhokisini
Isitsha samanzi esigoqekayo
I-Semi-Collapsible Jerry Can
I-Changzhou Kaiguan Packaging & Technology Co, Ltd. itholakala edolobheni laseChangzhou, esifundazweni saseJiangsu, eChina. Kusenkabeni yomfula i-Yangtze river delta yaseChina enezinto zokuhamba ezikahle kanye nempahla yokuhleleka ephezulu. Singabantu ibhizinisi lobuchwepheshe elizimele elinolwazi olucebile ekwakhiweni, ekuthuthukisweni, ekukhiqizeni imikhiqizo yokupakisha eguquguqukayo.
Ividiyo yokuhlola ingcindezi
HLOLA OKWETHU OKUBALULEKILE IMIKHIQIZO
I-Flexible futhi ithambile, igoqeka futhi ayisindi, ukunciphisa izindleko
isikhwama sokuzijabulisa ebhokisini
Isemi-Collapsible Jerry can
thina iseluleko ukukhetha
Workshop yethu ifakwe 4 amasethi igalelo imishini udini (Model 25A); 2 amasethi ovundlile umjovo udini imishini ka 120g, 4 amasethi mpo umjovo udini imishini 125g, 2 amasethi mpo umjovo udini imishini ka 80g, 2 amasethi imishini isikhwama okwenza.
Singanikeza nge-1 litre kuya ku-50 litre cheakerer ebhokisini; Futhi singanikeza ama-cubitainers kusuka ku-volum 1 litre kuye ku-25 litre.
Sinezitoko zazo zonke izikhwama zosayizi ojwayelekile. Imigqa yethu yokukhiqiza isebenza amahora angama-24.
Le nkampani ihlanganisa indawo engama-8000㎡
Iminyaka engu-12 yesipiliyoni sokukhiqiza
UMSEBENZI WOKUTHOLA UTHULI
Igumbi eli-4000㎡ elihlanzekile
I-sanitizer yesandla . Uketshezi olubulala amagciwane
Ijeli ye-Medical Ultrasound
Ukuthosa (i-Sake, i-soy sauce, i-Vinegar)
ini ingabe amakhasimende ethu athi?
ECyprus lau Hong kong SAR
Ikhwalithi enhle kakhulu.Yonke into isebenze njengoba kuchaziwe.Isikhwama esiqondile sisize ngempela ukunciphisa izindleko zokuhamba ngenkathi siqinile futhi sinzima njengoba kuveziwe
HattoriAkio Komura ISingapore
UJohn ubelusizo impela futhi wasisebenzela ngobungcweti ngokuxhumana okungenaphutha.Sizobuye sithenge kuye futhi.Siyabonga ngokusekelwa kwakho!
Uphenyo lohlu lwamanani
Kusukela yasungulwa, imboni yethu ibilokhu ithuthukisa imikhiqizo esezingeni lomhlaba ngokunamathela esimisweni sekhwalithi kuqala. Imikhiqizo yethu izuze idumela elihle kakhulu embonini futhi ithembekile phakathi kwamakhasimende amasha namadala ..
Ukupakisha izikhwama ze-hypochlo ...
Ithonywe yi-COVID-19, kunesidingo esikhulayo semikhiqizo elwa namagciwane njengesibulala-magciwane notshwala. Kusukela ekuqaleni konyaka ka-2020, imishini yethu isebenza amahora angama-24 nsuku zonke emakethe ye-hypochlorous acid disinfectant notshwala. Sithumela ama-PC angaphezu kwama-100000 b ...
Lo ngumkhiqizo wethu omusha onedizayini entsha yohlobo. Isikhwama senziwe ngepulasitiki enama-multilayer. Isendlalelo sangaphandle (i-polyamide + polyethylene) sivikela umoya-mpilo nomswakama; ukuminyana kwayo nokwakheka kwayo kungahluka kuye ngezidingo zeklayenti noma umkhiqizo. Isendlalelo sangaphakathi (i-polyethylene) ...
Bayanda abathengi bethu baqala ukusebenzisa i-cheertainer ukugcwalisa imikhiqizo ewuketshezi. Ngemuva kwalokho, yini umuntu ozijabulayo? Yisiqukathi esisha sokupakisha esihlanganisa ukuguquguquka kwesikhwama ebhokisini nezinzuzo ezithuthukisiwe zemikhiqizo yokupakisha eqinile noma eqinile, eyenza i-cheeratainer i-p ...
Imikhiqizo emikhulu yokupakisha ye-KAIGUAN yi-cheertainer (isikhwama esime mpo ebhokisini), i-ldpe cubitainer, isitsha samanzi esigoqekayo, i-jerry semi-folding can kanye nemishini yokugcwalisa.
© Copyright - 2010-2022: Wonke Amalungelo Agodliwe.